7 Nooc Oo Fiitamiino Ah Oo Faa’iidooyin Caafimaad Oo Badan U Leh Ragga Iyo Cuntooyinka Laga Heli Karo – Tusmoonline.com
7 Nooc Oo Fiitamiino Ah Oo Faa’iidooyin Caafimaad Oo Badan U Leh Ragga Iyo Cuntooyinka Laga Heli Karo
Arrimaha Bulshada U Gaar Ah Raga Wararka	December 22, 2016	370	Like
Sida caadiga ah abuur ahaan aadbay u kala duwan yihiin jidhka ragga iyo ka haweenku waxaanay taasi keentaa kala duwanaansho xagga baahiyaha aasaasiga ah ee jidhka aadamhu u baahan yahay rag iyo dumarba. Baahiyaha jidhka ee dhinaca cuntada waxa aasaas u ah baahidda jidhku u qabo fiitamiino kala duwan oo uu ku haqab beelo si uu ugu shaqeeyo uguna sii wato firfircoonida iyo wixii rabbi SWT ugu tala glay in uu qabto xubin kastaana awoodeeda iyo waxqabadkeedii Alle ugu tala galay ugu hagaagto. Cuntada habboon ee jidhku qaataa waxa ay keentaa in jidhku si habboon u shaqeeyo. Hadaba waxa jira 7 fiitamiin oo si gaar ah ragga ugu wanaagsan kuwaasi oo laga helo cuntooyinka caadiga ah ee aynu heli karno. Fiitamiinadani waxa ay kala yihiin:
Maadada Selenium: Maadada ama cunsurka cunteed ee Selenium waxa uu ka mid ah yahay canaasirta cunteed ee awoodda badan jidhka aadamaha siina ahna ka saacida in uu yareeyo daadashada timaha. Daraasado badan oo lagu sameeyey Selenium ayaa lagu ogaday in ay tahay maaddo cunteed oo awoodaysa shahwadda ragga oo kor u qaadda suurta-galnimada ninku ku uurayn karo haweenayda. Sidoo kale Selenium waxa ay hoos u dhigtaa heerka dufanka dhiigga ku jira oo qofka ka badbaadisa in uu ku dhaco faaliggu. Hadaba si aad maadadan muhiimka ah u heshid waxaad ku dadaashaa in aad qaadato cuntooyinka laga helo noolaha badda ee uu Kalluunku ka mid yahay.
Vitamin B: Fiitamiinkani waxa uu awoodeeyaa dareenka wanagasan ee qofka waxaanu hoos u dhigaa werwerka iyo qulubka nafsaaniga ah ee diiqadda qofka ku keena. Fiitamiinka B waxa uu wanaajiyaa hab-dhiska dhambaal-wadayaasha waxaanu neerfaha ku keenaa daganaansho iyo in dareen sidayaashaasi si habboon u shaqeeyaan. Sidoo kale Ragga waxa u wanaagsan Fiitamiinka B9 oo kor u qaada heerka awoodeed ee labnimo ee ninka waxaanu ragga ka saacidaa in ay si habboon uga soo baxaan masuuliyadda sariirta. Waxa soo raaca Fiitamiinka loo yaqaano B7 oo raga kala dagaalama bidaarka iyo guud ahaan daadashada timaha. Guud ahaan Fiitamiinka B iyo qaybihiisan aan soo sheegnay waxa laga helaa cuntooyinka midhaha ah iyo khudaarka cagaaran ee caleenta leh. Midhaha Fiitamiinkan laga helo waxa ka mid ah Lawska, Heedda, Digirta, Faasuuliyaha iyo Misirka, dhinaca khudaartana waxa ka mid ah saladhka, baytaraafka, Kaabajka, Baamiyaha iyo Badingaalka.
Zink: Maadada cunteed (Macdanta) ee Zink waxa ay lagama maarmaan u tahay caafimaadka dadka guud ahaan, gaar ahaana caafimaadka ragga. Macdanta Zink waxa ay ragga u tartaa awood dhinaca galmada ah oo uu yeesho. Waxa ay ilaalisaa heerka uu joogo hormoonka Testosterone oo keena in ninku aad u jeclaado in uu galmo sameeyo. Waxa ay sidoo kale macdantan cunteed awood u yeeshaa noolaha yaryar ee ku jira manida ninka ee aynu ka abuuranahay. firfircooni jidheed oo aanay shaqadu ninka dhibin iyo waliba wahsiga oo ka yaraada. Daalka ayay daawo u tahay maadada Zink. Meelaha ugu badan ee laga helo macnta cunteed ee Zink waxa ka mid ah hilibka xoolaha, kalluunka, gallayda, kaararka iwm.